Google inosimbisa kuti Hangouts haina kunyorwa | IPhone nhau
Google inosimbisa kuti maHangouts haashandise kunyorera-kumagumo kunyorera
Pablo Aparicio | | IPhone maapplication, Kupikisana
Google yekufona uye vhidhiyo yekufona sevhisi, Hangouts, haina magumo-kusvika-kumagumo kunyorera (end-to-end), zvinoreva kuti, nedare redare, hurukuro dzedu dzinogona akarova kana kuongororwa tisingazvione. Chinhu chisingaitike neApple's FaceTime.
Google yanga isati yambopa ruzivo nezvayo kusvika AMA yazvino (Ndibvunze Chero chinhu = ndibvunze zvaunoda) paReddit uye, kunyangwe zvisingazivikanwe chaizvo kuti mubvunzo waive chii, njodzi ingangove iripo. Mutauriri akapindura anosimbisa kuti "Hangouts haishandise magumo-kusvika-kumagumo kunyorera", chii inobvumidza Google kuwana uye kuendesa hurukuro dzedu pasina vashandisi kugona kuita chero chinhu nezvazvo.
FaceTime, Apple yekufona uye vhidhiyo yekufona sevhisi, inoshandisa kumagumo-kusvika-kumagumo kunyorera. Izvo zvirimo zvekufona kwedu zvakavanzika, zvakachengeteka uye zvinongowanikwa chete kwatiri nevanhu vatinotaura navo. Nehunyanzvi, Apple inogona kuita rudzi rwekurwisa kuti "ipinde pakati" yekutaurirana, asi izvo zveCupertino zviri pachena kuti kuvanzika kwevatengi kwavo chinhu chakakosha uye hazviite kuti vazviite.
MuHangouts, sekune Skype, encryption yekupedzisira-kumagumo haipo uye kana iri Google zvinoita sekunge haina vimbiso yekuchengetedza yerudzi urwu. Asi hazvifanirwe kuuya sekushamisika kuti makambani ane yavo yekutanga bhizinesi modhi kushambadzira "vanofarira kudzidza" nezve maitiro edu.
Rimwe dambudziko nekusava nerudzi urwu rwekunyorera nderekuti mushandisi ane hasha anokwanisa kuwana zvatinotaura kumira pakati pedu nemunhu watinotaura naye uye kuwana zvese zvatinotaura, kunyange chiri chinhu chisingaite uye zvakatonyanya kana tisina chinhu chakakosha chingave chinonakidza kune cybercriminal.
Zviripachena, kune zvikonzero zvakawanda zvekushandisa Hangouts kana Skype. Chikonzero chikuru ndechekuti Aya masevhisi maviri ari multiplatform uye isu tinogona kuishandisa pane chero chishandiso ine ingori internet kubatana, chimwe chinhu chisingaitike neFaceTime sezvo tichida kubatana kwedu kuti tive neApple chishandiso kuti tikwanise kutaura naye.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Google inosimbisa kuti maHangouts haashandise kunyorera-kumagumo kunyorera
Zviri nyore kubira WhatsApp account
Mhosva yeApple Watch Epik yave paKickstarter